DTL-4 uthotho Shear Bolt izihlanganisi
Isetyenziselwa ukudibanisa izihambisi kunye neendawo zonxibelelwano zemigca yokuhambisa ngee-voltages ezilinganisiweyo ze-35KV nangasezantsi kwii-terminals zenguqu zobhedu-aluminium yezixhobo zombane ezithe tyaba; Abaqhubi abasebenzayo: I-aluminium kunye nealuminium alloy conductor.
Ilungele i-aluminium 、 iintambo zealuminium kunye nezixhobo zombane ezinombane olinganisiweyo we-1KV nangaphantsi koqhagamshelo lwesiphelo seCopper
Umzimba: i-aluminium ephezulu ene-alloy kunye ne-Cu≥99.9%
Bolt: ubhedu okanye aluminium ingxubevange
Unyango ebusweni: pickling
Izihlanganisi ze-BSM zoomatshini kunye nemikhono yokulungisa yenzelwe ukuba isetyenziselwe izixhobo zombane ophakathi ukuya kuthi ga kwi-42 kV. Banokusetyenziswa kuluhlu lwe-l kV. Ubungakanani beekhondaktha ezihamba ukusuka kwi-10mm² ukuya kwi-1500 mm².
Izihlanganisi ze-BSM ziqukethe umzimba we-tin-plated, iintloko ze-shear bolt kunye nokufakwa kwesayizi encinci yomqhubi.
Yenziwe ngamandla aphezulu e-aluminium ekhethekileyo, ezi ziqhagamshela zinentloko ezimbini zokucheba iintloko ezineentloko zehexagon. Iibholiti ziphathwa ngearhente yokuthambisa. Iibholiti zoqhakamshelwano azinakususwa xa iintloko zabo zichetyiwe. Umzimba we-lug wenziwe nge-alenshi eqine kakhulu, eyenziwe nge-tin-plated aluminium alloy. Umphezulu wangaphakathi wemingxunya yomqhubi ugujiwe.